Teny nalaina sakaiza
Miaraka aminay no ahitanao ny teny faran'izay tsara indrindra, teny sy fahendrena momba ny fisakaizana sy ny namana, voalahatra araka ny abidia ary aseho mazava ho anao.
Ny teny nindramina hitanay momba ny finamanana dia mety ihany koa ho toy ny lahatsoratra miarahaba amin'ny karatra na na mailaka arahabaina na hafatra Whatsapp.
Teny nalaina momba ny finamanana - © Photo_Ma / Adobe Stock
Mikaroha amin'ny alàlan'ny fijerinay ireo teny nalaina, teny sy fahendrena tsara momba ny finamanana sy ny namana avy amin'ny mpanoratra isan-karazany avy amin'ny vanim-potoana maro:
Te hitovy fa tsy te hitovy, eo indrindra no misy ny fisakaizana tsy tapaka. Sallust
Ny tena fototry ny finamanana: finoana iray, fanantenana iray, asa iraisana iray! Misy fifaliana lehibe ao. Annette von Droste-Hülshoff
Ny fomba tokana hananana namana dia ny fanananao tena. Ralph Waldo Emerson
Fanamavoana no lehilahy izay aleon'ny olona mankasitraka ny sakaizany malala-tanana. Euripides
Ny finamanana dia tsy avy amin'ny tratrany rehareha. Johann Wolfgang von Goethe
Ny finamanana dia zavamaniry iray izay mahatanty ny haintany. Joseph Joubert
Mandihy eran'izao tontolo izao ny finamanana ary miantso antsika rehetra hifoha amin'ny vidin'ny fiainana feno fahasambarana. Epicurus an'ny Samos
Ny finamanana sy ny fitiavana dia zavamaniry roa amin'ny fotony iray. Ity farany dia manana voninkazo vitsivitsy fotsiny. Friedrich Gottlieb Klopstock
Ny faniriana ny tena finamanana sy ny fitiavana dia tombontsoa ho an'ny olona malemy fanahy sy nahita fianarana. Wilhelm von Humboldt
Ny finamanana kely dia sarobidy amiko kokoa noho ny fiderana an'izao tontolo izao. Otto von Bismarck
Ny namana dia olona azonao eritreretina mafy eo imasony. Ralph Waldo Emerson
Ny namana dia olona mahafantatra fa ilaina izy ireo izao. Oscar Wilde
Ny tena namana dia andriamanitra. Frederick II, ilay lehibe
Ny finamanana dia mikoriana avy amin'ny loharano maro, ny madio indrindra dia ny fanajana. Daniel Defoe
Ny finamanana dia mirindra amin'ny zavatra masina sy olombelona rehetra, tafakambana amin'ny hatsaram-panahy sy fitiavana. Marcus Tullius Cicero
Ny finamanana dia fanomezana avy amin'ireo andriamanitra ary fanomezana sarobidy indrindra ho an'ny olombelona. Benjamin Disraeli
Ny finamanana dia toy ny vola, mandresy mora kokoa noho ny mandray. Samuel Butler
Ny finamanana, izany dia fanahy iray amin'ny vatana roa. Aristote
Tsy misy olona afaka manao zavatra be loatra ho an'ny namana mahatoky. Henrik Ibsen
Raha manome ny olona ny voninahitra rehetra eo amin'izao tontolo izao ianao, inona no soa azo raha tsy manana namana holazaina izy? Catharina Elisabeth Goethe
Ny finamanana dia mahatonga ny fahasambarana hirehitra kokoa. Marcus Tullius Cicero
Sambatra ireo namana izay mifamatotra tokoa ka afaka mifampiteny. Charles Pierre Péguy
Amin'ny tena finamanana dia manome ny tenako ho an'ny namako mihoatra ny fanintona azy aho. Michel de Montaigne
Ny fihomehezana dia tsy ny fiandohan'ny finamanana ratsy indrindra, ary io no farany farany tsara indrindra. Oscar Wilde
Aza malaky manao namana ny olona iray, fa raha vao manao izany izy dia tsy maintsy miaraka amin'ny hadisoany rehetra. Matthias Claudius
Tsy tokony hiresaka momba ny namanao ianao: raha tsy izany dia hanimba ny fahatsapanao finamanana. Friedrich Wilhelm Nietzsche
Tsy ho lasa lavitra amin'ny finamanana ianao raha tsy te hamela ny hadisoana kely. Jean de La Bruyère
Mety tsy maintsy nahatsapa fitiavana ianao hahafantatra tsara ny fisakaizana. Nicolas Chamfort
Aza manao namana amin'ny olona tsy mitovy aminao. Confucius
Amin'ny lalan'ny finamanana ihany no ahafahan'ny olona mamantatra olona iray. Augustine Aurelius
Mahaiza manaja olona fa aleo olona vitsivitsy; ary ireto vitsivitsy ireto dia tokony hanaporofo ny tenany alohan'ny hatokisanao azy ireo. George Washington
Afatory aho, ampijalio aho, enjehoy aho, ampahory aho; Fa omeo tena namana akaiky ahy fotsiny aho. Marianne Ehrmann
Ny biby dia mpinamana indrindra. Tsy mametraka fanontaniana ianao ary aza mitsikera. Mark Twain
Ny fandeferana sy ny finamanana dia matetika no zava-drehetra, ary ny tena zava-dehibe indrindra dia azontsika atao ny mifanome. Novalis
Ny fitiavana mahatoky dia misy eo amin'ny olona samy hafa soatoavina, ary ny fisakaizana maharitra dia tsy misy raha tsy eo amin'ny olona mitovy soatoavina. Noho io antony io, ny faharoa dia mahalana noho ny voalohany. Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach
Amin'ireo fanomezana rehetra omen'ny lahatra antsika dia tsy misy tsara noho ny finamanana - tsy misy harena lehibe kokoa, tsy misy fifaliana lehibe kokoa. Epicurus an'ny Samos
Ny tena finamanana dia zavamaniry mitombo miadana tokoa. George Washington
Ny tena fisakaizana dia azo aorina amin'ny firaisan'ny natiora mitovy amin'izany. Ludwig van Beethoven
Fantatrao ve hoe iza ny tena namana tsara ary iza no antsoina hoe mora vidy? Iza, rehefa tsy hitanao izy, dia mivadika ho namana. Friedrich Freiherr von Logau
Hafa tokoa ny fihavanana sy ny fitiavana! Ny iray dia tempoly manjelanjelatra, ny iray mistery misarona mandrakizay. Eduard von Hartmann
Ireo izay mitady namana tsy misy diso dia mijanona tsy misy mpinamana. Kabus
Izay namantsika dia tia antsika; fa izay tia antsika dia tsy namantsika. Lucius Annaeus Seneca
Ny finamanana voaorina indray dia mitaky fikarakarana bebe kokoa noho ireo izay tsy mbola tapaka. François VI. Duke de La Rochefoucauld
Pejy fandokoana ny finamanana
Fifanarahana pejy fandokoana